Arsenal iyo United oo ku dagaallamaya Benzema
Wednesday, December 19th, 2018 - 06:52:06
Wednesday February 07, 2018 - 15:18:18 in Wararka by kubadbile news
Kooxaha Manchester United, iyo Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay dalab u direen weeraryahanka Real Madrid Karim Benzema xagaaga soo aadan.
30 jirkaan ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Los Blancos dhamaadka xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay shan gool 19 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan – oo ay ku jirto labo kulan oo La Liga ah.
United ayaa si joogta ah u soo bandhigtay xiisaha ay u qabaan ciyaartoyda Real Madrid, sida Gareth Bale, Cristiano Ronaldo iyo Mateo Kovacic.
Diario Gol ayaa haatan ku waramaysa in Benzema uu yahay ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee lala xiriiriyo Old Trafford, inkastoo qaar ka mid ah ciyaartoydooda Premier League ay sidoo kale la siiyay fursad ay kula soo saxiixan karaan xiddiga reer France.
Tottenham iyo Arsenal ayaa ka mid ah kuwa loo magacaabay warbixinta, halka kooxda heysata horyaalka Talyaaniga Juventus ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay ku jirto liiska baacsiga lagu hayo weeraryahanka.
Tababaraha United Jose Mourinho ayaa meesha ka saaray in weeraryahanada kale ee weerarka sii ciyaari doona horaantii Isbuucaan, laakiin Madrid ayaa la fahamsan yahay inay heshiis la gaartay Red Devils sababtoo ah waxay doonayaan inay David de Gea ka qaataan.
Benzema ayaa horey ugu soo garab ciyaaray Mourinho xiligii ay ku sugnaayeen Real Madrid, halka uu dhaliyay 186 gool 389 kulan oo uu u saftay.